Iphupha leCannon Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Umwonyo uyintlambo emxinwa ngokukodwa eneendonga ezixineneyo. Ukunyuka okanye ukwehla kumathambeka kunzima kakhulu kwaye kuyingozi. Uninzi lweerorge lunokuwela, nangona kunjalo zinokungena kunye nokuphuma, oko kukuthi. Kwiintaba ezininzi ezijikelezileyo el mundo imiwonyo edumileyo kunye nemiwonyo inokufunyanwa. Bahlala behamba kwiindlela ezikhuselekileyo. Imijelo yenziwa yimisinga yamanzi eqingqe ukusika okunzulu kumhlaba ongaphantsi.
Iphupha malunga ne-canyon linganomdla kwaye linomdla, okanye lingoyikisa. Ukuba uphupha uziphosa kumwonyo, ngokuqinisekileyo ujongene noloyiko olukhulu. Ukuba iphupha linoluvo lokungashiyi kwintlambo enzulu yomlambo, unokoyika. Mhlawumbi uyonwabela indawo entle xa uhamba intaba. Ke ukutolikwa kwamaphupha, kuxhomekeke kunxibelelwano ngqo.
1 Uphawu lwephupha «umqala» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umqala» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umqala» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umqala» - ukutolikwa ngokubanzi
Umwonyo, ekutolikeni kwamaphupha, luphawu lokuhamba kwengqondo kunye neemvakalelo ezihamba ngephupha. Isimboli yamaphupha itsala umdla wakho kubudlelwane nabantu abathile ongakhange uhlawule ngokwaneleyo kubo kude kube ngoku. Ukuphupha kuhamba kwilizwe leemvakalelo zakho ezinzulu ephupheni.
Ukunyuka ngomwonyo kunokuba ngumqondiso wokuhamba nge-canyon ekutolikeni amaphupha. Isigaba sobomi ukuba. Ukuba oku kuvakala kunzima, isimboli yephupha inika ithemba xa uphupha: nje ukuba amazantsi adlule, ukuphupha kungaphefumla ukukhululeka.
Ukutolikwa okuxhaphakileyo kwamaphupha, iimeko ezihamba nesimboli yamaphupha "umwonyo" zibalulekile. Ngokubanzi, intlambo ebiyelwe ngeendonga ezimqengqelezi ibonisa umonakalo onokwenzeka xa uphupha ngokungakhathali nokungakhathali.
Ukubona umwonyo kuyacebisa Ukungahoywa oko kuyabenzakalisa abanye. Ukuba iphupha lisemwongeni, iphupha litsalela ingqalelo kwinto yokuba umntu usendleleni eyingozi. Ukungazi ngakumbi kubunzulu kukuchazwa kwamaphupha isimboli yephupha eliye lahamba nenkampani embi. Ukuwela enzonzobileni kulumkisa ukuba iinkampani ziya kusilela kwaye zifuna ukuthobeka.
Uphawu lwephupha «umqala» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, uphawu lwephupha "umqala" luphawu lwexinzelelo lwengqondo. Rhoqo intlambo inendawo enye yokungena. Oku kufumaneka kutoliko lwamaphupha kuphela Phuma yemeko, oko kukuthi, ukutshintsha indlela oziphethe ngayo. I-subconscious imele ingxaki ebalulekileyo okanye uxinzelelo lwengqondo ephupheni njengomngcipheko osongelayo.
Ukunyuka kweendonga kunye nokude ngakumbi kwintlambo kuvela kwihlabathi, kukhulu ngakumbi isoyikiso yengqondo. Uphawu lwephupha lunokubonisa ukugula okanye ilahleko ebuhlungu kakhulu. Ukuba umntu uhamba ezantsi komwonyo ephupheni aze ekugqibeleni awushiye, lo ngumqondiso kutoliko lwephupha lokuba umntu ophuphayo angaphambukisa amehlo akhe kwiimvakalelo zakhe kwaye awuqondise kwindawo ahlala kuyo ngaphandle.
Ukubonwa kubunzulu bomwonyo, amathambeka angaba sisikweko kumgaqo wokhuselo wabasetyhini, kuxhomekeke kutoliko lwengqondo ngephupha. Rhoqo, nangona kunjalo, umbono ovela phezulu uye enzonzobileni wenzeka ephupheni.
Uphawu "lwamaplanga" luphawu lokoyika okungaziwayo, kunye noloyiko lwe iimvakalelo ezigabadeleyo. Ephupheni, i-subconscious ityhila ukungaqiniseki malunga neemvakalelo zakho kunye neempawu zomntu, kunye nokubhekisele kwindawo yokuhlala yangaphandle yephupha.
Ukuba umntu ophuphayo uyabuganga bokuhla ngomwonyo okanye wakhe ibhulorho phezu kwawo, uphawu lwephupha luphawu lokuzazi. Ngokwenkcazo yamaphupha ezengqondo, ukuwela umwonyo kubonisa ukufumana indlela eya kuwe.
Ekuweleni kumwonyo onzulu, apho iphupha elo lisinda lingaphazanyiswa, ukomelela kwengqondo ephupheni kuboniswa ngokokutolikwa kwephupha. Ukuwela emwongeni nokwenzakala kubonisa njengephupha imeko yokuba usesichengeni ngaphakathi kunokuba uboniswe ngaphandle. Ukomelela okuboniswa ngumphuphi kwindalo yakhe kwihlabathi lokuvuka kudlalwa. Eyona nto ibalulekileyo, zithambile.
Uphawu lwephupha «umqala» - ukutolika kokomoya
Ngengqondo egqithileyo, uphawu lwephupha 'umwonyo' uquka Ngaphantsi komhlaba nezinto zehlabathi. Ngenxa yoko, ezinzulwini zenzonzobila, ngokokuchazwa kwephupha lokomoya, uloyiko lokufa lubonakalisiwe ukufa.